Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, Windows Media Player agaghị ịbụ onye ala ọzọ gị. Ọ bụ Ohere si defaulted mgbasa ozi ọkpụkpọ nke na-enyekwa ihe owuwu isure CD na data DVD na gị DVD burner mbanye. N'ụzọ dị mwute, na nhọrọ ọkụ a video DVD bụ adịghị, nke pụtara na ị pụrụ ọkụ DVD na na na n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ na Windows Media Player.
Part 1: Olee Ọkụ Windows Media Player faịlụ ka a Video DVD
Part 2: Olee Ọkụ Data DVD na Windows Media Player
Nkebi nke 3: Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti a Data DVD na a Video DVD
Nkebi nke 4: Olee otú Play DVD na Windows Media Player
Lee, m ga-egosi gị otú tọghata Windows Media Player faịlụ ka a video DVD format na mgbe ahụ ọkụ ha ka ha a DVD diski na otu software; na Wondershare DVD Creator (DVD Creator for Mac). Ọ bụ dị mfe dị ka 1-2-3 isure a video DVD si Windows Media Player faịlụ. Ị ga-mkpa na-ekpe ikpe version na wụnye na kọmputa gị mbụ.
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu Windows Media Player videos ka DVD burner
Mgbe DVD Creator arụnyere na kọmputa gị, ẹkedori ya na ị ga-ahụ bụ isi window dị ka n'okpuru. Pịa Import button ịgbakwunye Windows Media Player faịlụ jidesie usoro ihe omume. Alternatively, ikpuru na-dobe videos kpọmkwem n'elu interface. Ị nwere ike effortlessly ịgbakwunye, ihichapụ ma ọ bụ hazie kwukwara Windows Media Player faịlụ na nke ahụ bụ na ihe si tree na nke ahụ bụ na n'aka ekpe n'akụkụ nke interface. E wezụga na-ere ọkụ videos ka a playable DVD diski, a usoro na-enyere gị aka ime ka a DVD ngosi mmịfe na gị collection nke foto na music.
Nzọụkwụ 2. Dezie videos na slideshows
All nkịtị edezi ngwaọrụ na-nyere aka gị videos. Ọ bụrụ na foto na-dị ọnụ, ha ga-etolite a foto ngosi mmịfe-akpaghị aka. Abụọ nwere ihe Dezie icon ọzọ na aha. Pịa ya na-emeghe edezi window gị video ma ọ bụ ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 3. Malite na-ere ọkụ Windows Media Player DVD diski
Nke a DVD burner software-enyere gị aka ime ka a video DVD nke ahụ na-agwụ agwụ na a menu. Nanị họrọ a menu na hazie ya a ndabere image, music na ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ. Mgbe ị na-afọ ojuju na nkiri, pịa apa ọkụ bọtịnụ ọkụ DVD anya Windows Media Player. E nwere ihe bụghị mmachi na DVD diski ụdị ka ogologo oge gị DVD burner akwado ha, tinyere DVD + R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW na abụọ-layered DVD discs.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ dee Windows Media Player faịlụ ka a DVD ma ọ bụ CD maka nchekwa nzube; Nanị na-eso nzọụkwụ n'okpuru gị Windows Media Player 12 nke ahụ na-esịne ke Windows 7.
Nzọụkwụ 1: Run Windows Media Player site Malite> All Mmemme> Windows Media Player. Ọ bụrụ na ndị Media Player bụ ugbu a na-emeghe ma na ị na Ugbu a Fim mode, pịa Gbanwee na Library bọtịnụ na elu-nri akuku nke ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 2: Na ọkpụkpọ si n'ọbá akwụkwọ, gaa na apa ọkụ taabụ. Wee pịa apa ọkụ Nhọrọ button wee pịa Data CD ma ọ bụ DVD.
Nzọụkwụ 3: Fanye a ide diski n'ime gị CD ma ọ bụ DVD burner. Ọ bụrụ na ndị AutoPlay dialog igbe na-egosi, emechi ya. Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ihe karịrị otu CD ma ọ bụ DVD mbanye, pịa mbanye na ị chọrọ iji ọkụ nke data DVD ke navigation ebi ndụ.
Nzọụkwụ 4: Chọta ihe na gị ọkpụkpọ si n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ Detuo na diski. Ugbu a ịdọrọ ihe si nkọwa ebi ndụ na ndepụta ebi ndụ ike a apa ọkụ ndepụta. Ị nwere ike ịdọrọ ihe elu ma ọ bụ ala na ndepụta iji ịgbanwe ihe ọkwá. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepụ otu ihe site apa ndepụta, nri-pịa ihe, wee pịa Wepụ site na listi.
Nzọụkwụ 5: Mgbe ị na afọ ojuju na apa ọkụ ndepụta, pịa Malite isure. Ọ ga na-ọtụtụ minit isure gị na ndepụta nke Windows Media Player faịlụ ka a DVD diski.
A data DVD bụ nnọọ maka nchekwa nzube mgbe a video DVD-enye gị ohere playback na-ekiri ya bụ ọdịnaya ọ bụla ọkọlọtọ DVD ọkpụkpọ na TV. The video na ọdịyo faịlụ na a data DVD pụrụ n'ụzọ dị mfe zigara gị na kọmputa. Dị ka a video DVD, na Windows Media Player faịlụ mkpa ka a tọghatara dị ka video DVD si nkọwapụta ma kpọọ ya ọkụ na a DVD-ere ọkụ software yiri Wondershare DVD Creator (DVD Creator for Mac).
Ma ọ bụ a data ma ọ bụ video DVD, i nwere ike iji Windows Media Player na-egwu ya. N'ezie, diski ga-amalite na-akpọ-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-amasị na-egwu a diski nke e ịtinye; ị ga-mkpa na-emeghe Windows Media Player wee pịa diski aha ke navigation ebi ndụ nke ọkpụkpọ si n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara playback na DVD na Windows Media Player, ị nwere ike na-agbalị iji Windows Media Player si DVD mmezima ngwaọrụ idozi ụfọdụ nke nkịtị nsogbu dị ka e depụtara na-esonụ:
Pịa Malite button, wee pịa Control Panel.
Na search igbe, pịnye mmezima ngwaọrụ, wee pịa Nchọpụta nsogbu.
Pịa View All, wee pịa Windows Media Player DVD.
Ọ bụrụ na ị nweta ozi na-ekwu na kọmputa gị na-efu a codec ma ọ bụ na ị ga mkpa a DVD decoder, na-agbalị wụnye niile-na-otu codec ngwugwu dị ka K-lite Codec Pack. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ajụjụ ndị ọzọ, na-eche free ịkpọtụrụ anyị Nkwado si otu.
Olee ka windows 10-agba ọsọ na gị mbadamba
5 Alternatives ka Windows Movie Onye kere
Free AVI Player maka Windows 8: Easily Play AVI Files na Windows 8
> Resource> Windows> Olee Ọkụ DVD na Windows Media Player 11,12